DIMORFOTEKA: BEERASHADA IYO DARYEELKA EE BERRINKA BANNAAN, NOOCYADA IYO SAWIRRADA UBAXA - SOOSAARKA DALAGGA
Dimorofote: sharax, sii kordhaya abuur
Haddii aad ubaahan tahay raad aad u dhalaalaya, indho indheyn leh oo ubax ah, laakiin isla xilligaas oo ah ubaxyo aan badneyn, dimorphotech waxaa lagu talinayaa in la dalbado beeraley qibrad leh. Maqaalkani, waxaad baran doontaa noocyada kala duwan ee warshadani waa, iyo sidoo kale inaad barato shuruudaha lagu beero iyo daryeelka. Kordhi, ubaxan ayaa lagu koray laynka dhexe.
Herbaceous (Buulo) sanadlaha ama dilka ah, oo leh ascending, iyo sidoo kale ereyga afkoda, ubax badan - dhammaan waxan ku saabsan dimorphoteca. Ubaxkan wuxuu gaaraa cabbirka 40 cm. Si fudud ayaad u kala sooceysaa dimorfoteku ee warqadaha - waxay ciriirinayaan dhogor ama gooni goosad ah, caleemuhu sidoo kale waxay noqon karaan xaydh. Waxay ku ururiyaan rosette ama u koraan si siman. Sababtoo ah xaqiiqda ah in dimorofote ku kora carrada dabacsan dabacsan, qoyaan ee ku urursan qoto dheer - xididkii warshadu waa ul dheer, oo leh dhammaadka xamaasad.
Ubax ee warshadkan waxaa ku yaala dambaska cirifka ah, kaasoo koraya 8 sm oo ballaaran, kaas oo ku koraa dherer badan, barxad jilicsan, oo leh ubax jilicsan oo cufan ah oo caan ah (waxay noqon karaan huruud, orange, cad ama burgundi). Dhexdhexaad ee ubaxa waxaa ku yaal xarun tubbeel ah oo lipsan, taas oo noqon karta terracotta, jaalle ama lilac. Ubaxa dhirta ayaa muujiya iftiinka qorraxda, taas oo ka ilaalisa roob ama habeen qoyan. In kasta oo xaqiiqda ah in ubaxu ku nool yahay 4-5 maalmood oo keliya, burooyinkeeda cusub waxay si dhakhso ah ugu koraan goobta ubaxa dhintay, sidaas darteed ubaxu wuxuu soconayaa ilaa laba bilood, sida caadiga ah, kuwani waa bilaha ugu dambeysa xagaaga.
Ma taqaanaa? Magaca caleenta dhirtaasi waxay ka timaadaa Giriigga: Dimorphos, kaas oo loo tarjumi karo "qaab labanlaab" iyo sheyga, oo u tarjumaya "karti".
Magacani wuxuu ka tarjumayaa ishortaagga dhirta, kaas oo leh ubaxyo bacrin ah oo caws ama duuban, laakiin waxay soo saaraan laba nooc oo midho ah - kuwani waa miraha istiraatiijiga oo kale ah, qaab yar oo googooto ah, qaabka lafdhabarta, iyo sidoo kale siman, aan ahayn miro kulul, oo leh xuduud ballaadhan oo dhexda dhexe ah. Labada nooc ee dhirta waxay u koraan ubax isku mid ah. Seeds of dimoroolology waa weyn, ilaa 7 mm, hal garaam ah waxaa jira qiyaastii 500 gogo, biqilka abuur sii jiraya 2-3 sano.
Cirridka dhirta waxaa ka mid ah in ka badan laba nooc oo daraasad ah. Kuwa ugu caansan jardiinooyinka waa laba nooc, tan waa maktabada loo yaqaan "dimorphological excavated and rainforest". Sidoo kale waa la yaqaan waa noocyada kala duwan ee hybrid, oo ay ku jiraan noocyo badan oo hybrid ah.
Raaxo-cabbirku waa geedo yar yar oo ka yar 15 illaa 20 cm oo dherer ah. Caleemuhu way dheer yihiin, barafka, afkuna toosan yahay oo u egtahay. Cajiimnaydu waxay ku koraan laydhka sare leh ubaxyo cad ama kareem on dhinaca sare, iyo hoosta leh ubax caleemo cas. In xarunta of ubaxa waa macno dahabi ah qurux badan. Labada caleemaha iyo ubaxyada noocan ah ayaa ur xun.
Dimorfote dheeraad ah - Warshadani waa 40 cm oo dherer ah, kaas oo koraya hal sano, waxa uu leeyahay qummanaan iyo jeexjeexan laamo leh caleemo jilicsan oo caan ah oo la jilciyey oo la yiraahdo pubescent. Inflorescences waa dambiile oo leh quraarado oranji ah oo qurux badan iyo dhexdhexaad madow. Noocyada ugu badan ee la isticmaalo ee hoosaadkan waa astaanta Polar.
Iyada oo ay sabab u tahay xulashada iyo ka gudubka labada nooc, ayaa maktabadda dimorfeed ee isku dhafan lagu sameeyay. Xididku waa cufan, oo dhererkiisu yahay afartan mitir, caleemaha ku yaala waa dhadhanka xiga ama guud ahaan. Ubadka waa weyn oo leh midab jaalle ah oo midabyo leh oo midabyo kala duwan leh, tusaale ahaan, midab buluug, midab cad, midab casaan ama casaan.
Ma taqaanaa? Wadanka ubaxa quruxda badani waa Koonfurta Ameerika. Noocyo badan oo waaweyn ayaa la beeray tan iyo qarnigii 18aad.
Warshad Tani waa ugu fiican ee ku filan ciidda la furay, buuxiyey tiro badan oo Bacriminta organic. Dimorfote lafteedu waxay dareemeysaa raaxo leh meelaha aan iftiin lahayn, laakiin ha ilaawin in dimorphotech ubaxyada qorraxda. Goobidda iyo daryeelka ee warshadkan uma baahna xoog badan haddii aad doorato goobta saxda ah ee bannaanka u furan oo u hoggaansana xeerarka qaarkood.
Dimorfoteka wuxuu u adkeysanayaa abaar, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ku beertid meel ka ilaalisa roobka. Karaac kale waa dabaysha u adkaysta, sidaas darteed waxaad ku beeri kartaa meel fiican oo afuufo. Isku day in aad dhirtii warshad yar ku shubto kuleyl aad u kacsan. Tan iyo dhirta ay is-buuxinayso, miraha waa la soo ururin karaa bilowga Agoosto, waxay si aad ah u abuureen sanduuqyada xilligan. Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha inay seegaan xilligan, maaddaama abuurku soo deyn doono.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa xulashada sanadka ugu caansan.
Seeds of warshad this lagu beeray lagu koriyo (lagu koriyo ama xayawaanka daaqada) ee dhexda guga. Waxaad sidoo kale ku beeran kartaa sanduuqyada inta lagu jiro dhismaha saddex caleemo. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarka ugu fiican wuxuu noqon karaa in lagu dhejiyo 3 miraha si gooni gooni ah, dheryahan sida waa inuu ahaado nafaqada nafaqada ah ee Bacriminta dabiiciga ah, carrada beerta iyo ciid. Geeduhu waxay leeyihiin xididada dabiiciga ah, sababtaas awgeed si fudud ayaa loo dhaawici karaa inta lagu jiro isu tallaalidda. Marka laga hadlayo geedo laga beero dheryaha, nidaamka xididka caadi ahaan wuxuu qaataa xididka.
Habka yar yar
Seeds u baahan tahay in lagu beeray dhulka bilaash ah dhamaadka xilliga guga, kaliya ku rusheeyeen dhulka yar. Isku darka miraha si siman sariirta, haddii dhirta u kacdo marar badan, waxaa lagama maarmaan ah in ay dhuuban tahay si ay 15-20 cm u dhexeyso iyaga u dhexeeya. Si ubaxu u bisho, waxaad u baahan tahay inaad foorno ama dharka aan loo isticmaalin muddo ah. Haddii aad sameysid wax kasta oo sprouts ku muuqdaan 2 toddobaad.
Waa muhiim! Marka biqilka uu leeyahay 3 caleemo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso xalka daciifka ah ee bacriminta Zdrav'en at heerka 0.5 g 10 l oo biyo ah, iyo quudiyo sprouts. Tani waxay u oggolaaneysaa dhirta yaryar ee daciifka ah si ay u helaan xoog iyo dhaqso u koraan
Waxaa lagama maarmaan ah in la cabbo dimorpotek waxoogaa yar, laakiin wakhti caadi ah, haddii qallalan koranto. Laga soo bilaabo bilowgii, dhirta si taxadar leh loo baahan yahay, marka baadiyaha u koraa, waxa laftiisa isku dayi doonaa. Haddii aad rabto in aad ubaxdo this ubax sida perennial, ka hor xilliga qaboobaha ee xilliga dayrta, ku baadiyaha baadiyaha galay digsi oo ku hayso guriga ilaa bilowgii xilli diiran, ka dibna mar kale soo qaado.
Waa muhiim! Ubaxa laguma talinayo in la bacrimiyo macdanta macdanta oo leh halbeeg adag, maadaama ay kicin karaan kobcinta cagaarka, ee aan ahayn ubax.
Bacriminta Phosphate-potassium (superphosphate iyo potassium nitrate) ayaa ugu habboon ujeeddooyinkan, kuwaas oo loo isticmaalo qaybo yaryar marka burooyinkooda la sameeyo. Warshad this Astrov qoyska ma aha mid aad u furricious iyo uma baahna dayactir taxaddar ah, taas oo ah sababta ay u heshay caan ka mid ah inuu bannaanka u. Markaad beerta dimorfotek waxaad ku kori doontaa muddo dheer.
Warshadani waxay ku faaftaa caawinaadda miraha, kuwaas oo u baahan in la soo ururiyo xagaaga hore ee dhowr jeer booqashooyin, sida ubaxa u bislaadaan si aan qummaneyn, miraha way u qulquli karaan, taas oo horseedi doonta is-goosashada. Si loo ilaaliyo koritaanka ubaxyada, dooro abuurka ubaxa waaweyn.
Ubaxani waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo ku yaala boodhadhka lagu sameeyo meelo iftiin leh. Waxay sidoo kale ku habboon yihiin sanduuqyada balakoonka, markay ka soo baxaan kulaylka, iyo biyo la'aanta dheer. Waxa kale oo aad ka dhigi kartaa meel u dhow cawska ama koox. Dimorotot-ku waxay u muuqataa mid qurux badan oo ay la socdaan duuduubyada - venidium, ageratum, helotrope, acroklinum, arctotis, pelargonium iyo petunias. Haddii aad haysato beerta dhagaxa ah, waxaad ku beeri kartaa ubaxkan soo socda ee dhirta kale ee abaarta u adkaysata.
Dimorofote ubax waa qurux badan oo qurux badan oo beertii kasta ama sariirta ubaxa. Waa abaar u adkaysta oo aan hoos u dhigin deegaanka, beerashada waxaa laga sameeyey miraha iyo geedo labadaba. Goobtaada u dhow gurigaaga ama si toos ah balakoonka, ka dibna way kugu farxi doontaa sanad walba.